Adeegga Internet-ka qeybo kamid ah Soomaaliya oo dib usoo noqday
MUQDISHO, Soomaaliya - Muqdisho iyo gobollada Koonfurta Soomaaliya waxay dib u heleen adeeggii Internet-ka ee ka maqnaa mudo afar maalmood ah, kadib markii ciladdii ku timid xarigga Fiber optic ee badda gunteeda mara la xaliyo.
Shirkadda Hormuud, oo Internet-ka bixisa ayaa qoraal ay soo saartey caawa ku shaacisay inuu soo laabtey adeegga, iyadoo dhanka kale raaligelin ka siisay dadka isticmaala ee macaamiisha ah ciladda dhacday.
Waaa markii labaad oo sanadkan ay dhacdo cilad noocan ah, iyadoo midii hore iyo tan cusuba ay kusoo aadeen xili dalka ay ka jiraan xaaladdo siyaasadeed, sida xilka qaadistii Khayre iyo magacaabista Xukuumadda Rooble.
Kutladda ayaa sheegtey in doorashadii Biixi ay uga dartay saxaafada maamulkaasi gooni isu taaga ah.
Axmed Madoobe oo si adag uga hadlay nabadoon lagu dilay Kismaayo
Soomaliya 18.06.2019. 04:26
Siyaasiyiin si adag uga hadlay dadkii lagu laayey Gaalkacyo
Soomaliya 15.06.2019. 10:49
Karaash oo Qardho ka dhagax dhigay mashaariicyo horumarineed
Puntland 12.06.2019. 19:35
Farmaajo oo ogolaadey muddo kordhinta loo sameeyay AMISOM
Soomaliya 10.06.2019. 13:01
Garoonka Muqdisho oo qashinka laga mamnuucay iyo xeebta oo dayacan
Soomaliya 06.06.2019. 08:50
Danjiraha cusub ee Midowga Yurub oo gaarey Muqdisho
Soomaliya 03.06.2019. 15:31
Al-Shabaab oo weerar saf-balaaran leh ka geystay gobolka Bay
Soomaliya 01.06.2019. 04:04